Ch 21 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 21 Matthew
21:1 Ary nony efa manakaiky an'i Jerosalema, ary tonga tao Betifaga, eo amin'ny Tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy i Jesosy,
21:2 ka nanao taminy: "Mankanesa any an-tanàna izay tandrifin'i anao, Ary niaraka tamin'izay dia hahita boriky mifatotra iray, ary ny zanany eo aminy. hanafaka azy ireo, ka hitarika azy ho ahy.
21:3 Ary raha misy na inona na inona no efa nolazaiko taminareo, milaza fa ny Tompo dia mila azy. Ary Izy no handroaka azy ireo avy hatrany. "
21:4 Ary izany rehetra izany dia mba hahatanteraka izay nolazaina tamin'ny alalan'ny mpaminany, nanao hoe:,
21:5 "Lazao amin'i Ziona zanakavavy: Indro, ny mpanjaka avy ho anao fanekena amim-pahatsorana, nipetraka teo amin'ny boriky sy amin'ny zana-boriky, zanak'i iray zatra ny zioga. "
21:6 Dia ny mpianatra, mandeha mivoaka, nanao araka izay nasain'i Jesosy azy ireo.
21:7 Ary dia nentiny ny boriky sy ny zana-boriky, Ary ny olona naninjitra ny lambany aminy, ary nanampy azy hipetraka eo aminy.
21:8 Ary nisy maro be vahoaka namelatra ny lambany teny an-dalana. Fa ny sasany nanapaka rantsan-kazo ka nampiely ny fahavaloko teny an-dalana.
21:9 Ary ny vahoaka izay nialoha azy, sy ireo izay nanaraka, niantso, nanao hoe:: "Hosana ho an'ny Zanak'i Davida! Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Hosana any amin'ny avo indrindra!"
21:10 Ary rehefa niditra tao Jerosalema, ny tanàna manontolo nanome fo, nanao hoe:, "Iza io?"
21:11 Fa ny olona nanao hoe:, "Ity no Jesosy, ny Mpaminany avy any Nazareta any Galilia. "
21:13 Ary hoy Izy taminy:: "Voasoratra: ‘My house shall be called a house of prayer. But you have made it into a den of robbers.’ ”
21:14 And the blind and the lame drew near to him in the temple; dia nahasitrana azy Izy.
21:15 Then the leaders of the priests and the scribes became indignant, seeing the miracles that he wrought, and the children crying out in the temple, nanao hoe:, "Hosana ho an'ny Zanak'i Davida!"
21:16 Ary hoy izy ireo taminy, “Do you hear what these ones are saying?” But Jesus said to them, "Azo antoka fa. Have you never read: For out of the mouth of babes and infants, ianao, efa tanteraky ny fiderana?"
21:17 Dia nandao azy aoriana, dia nivoaka, any an-dafin'ny tanàna, into Bethania, and he lodged here.
21:18 Avy eo, as he was returning to the city in the morning, he was hungry.
21:20 And seeing this, the disciples wondered, nanao hoe:, “How did it dry up so quickly?"
21:21 And Jesus responded to them by saying: "Amen Lazaiko aminareo, if you have faith and do not hesitate, not only shall you do this, concerning the fig tree, but even if you would say to this mountain, ‘Take and cast yourself into the sea,’ it shall be done.
21:23 Ary rehefa tonga tao amin'ny tempoly, raha nampianatra Jesosy, ny mpitarika ny mpisorona sy ny loholon'ny vahoaka nanatona azy, nanao hoe:: "Fahefana manao ahoana no anaovanao izao zavatra? Ary iza no nanome anao izany fahefana?"
21:24 Ho setrin'izany, Hoy Jesosy taminy:: "Izaho kosa hanontany anareo amin'ny teny iray: Raha lazao amiko izany, Izaho kosa dia hilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao.
21:25 Ny batisan'i Jaona, izay avy tany? Avy tany an-danitra, sa avy tamin'ny olona?"Fa nataon'izy ireo kosa anakampo, nanao hoe::
21:26 "Raha hoy isika:, 'Avy any an-danitra,'Dia hovaliany hoe isika:, 'Koa nahoana no tsy nino azy?'Fa raha holazaintsika hoe kosa, 'Avy tamin'ny olona,'Isika, manana ny vahoaka mba hatahotra, fa izy rehetra Jaona ho mpaminany. "
21:27 Ary noho izany, Dia namaly an'i Jesosy ny hoe:, "Tsy fantatray." Dia hoy izy taminy koa: "Ary tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao.
21:28 Ahoana anefa no toa anao? Nisy lehilahy anankiray nanan-janaka roa lahy. Ary nanatona ny voalohany, hoy izy:: 'Zanaka, mivoaka androany mba hiasa amin'ny tanim-boaloboko. '
21:29 Sy ny fandraisana andraikitra, hoy izy:, 'Tsy vonona aho.' Anefa rehefa afaka izany,, rehefa nifindra ny fibebahana, dia lasa.
21:30 Ary nanatona ny hafa, dia niteny toy izany koa. Dia namaly, hoy izy:, 'Handeha aho, Tompo. 'Ary tsy nandeha.
21:31 Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapon 'ny Ray?"Dia hoy ireo taminy, "Ny voalohany." Hoy Jesosy taminy:: "Amen Lazaiko aminareo, fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no hialoha anao, ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
21:32 Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Nefa na dia efa nahita izany, tsy mibebaka, mba hino Azy.
21:33 Mihainoa fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy, ny rain'ny fianakaviana, izay nanao tanim-boaloboka, ka nanodidina azy tamin'ny fefy, ary nihady mpanao gazety ao anatiny, ary nanao tilikambo. Dia nampindrana izany ny tantsaha, Ary niainga mba hivahiny any ivelany.
21:34 Avy eo, raha ny fotoana ny voankazo mby akaiky, dia naniraka ny mpanompony izy hankany amin'ny mpiasa tany, ka mba handray ny vokatra.
21:35 Ary ny tantsaha nahazo ny mpanompony; dia namely ny iray, ary ny anankiray novonoiny, ka nitora-bato indray.
21:36 Indray, dia naniraka mpanompo hafa, mihoatra ny
alohan'ny; ary nitondrany azy ireo toy izany koa.
21:37 Avy eo, any amin'ny tena farany, dia naniraka ny zanany hankany aminy, nanao hoe:: 'Ho matahora ny zanako.'
21:38 Fa ny tantsaha, nony nahita ny zanaka, nifampilaza: 'Ity no mpandova. Avia, aoka hovonointsika izy, ary avy eo dia hanana ny lovany. '
21:39 Ary apprehending azy, dia namoaka azy tany ivelan'ny tanim-boaloboka, dia namono azy.
21:40 Noho izany, raha ny tompon'ny tanim-boaloboka tonga, hataony ahoana moa izany mpiasa tany ho any?"
21:41 Dia hoy ireo taminy, "Izy no hitondra ireo olon-dratsy mba ratsy farany, ary Izy no ampisambory avy ny tanim-boaloboka hafa tantsaha, iza no havaliko an'i azy ny vokatra amin'ny fotoany. "
21:42 Hoy Jesosy taminy:: "Efa mbola novakinareo ao amin'ny Soratra Masina: 'Ny vato nolavin'ny mpanao trano no efa tonga vato fehizoro. Ny Tompo no nanao izany, Ka mahagaga eo imasontsika?'
21:43 Noho izany, Lazaiko aminareo, fa ny fanjakan 'Andriamanitra dia halaina avy aminareo, ary dia homena ho any amin'ny firenena izay mamokatra ny voa.
21:44 And whoever will have fallen on this stone shall be broken, nefa tena, on whomever it shall fall, it will crush him.”
21:45 Ary raha ny mpitarika ny mpisorona, sy ny Fariseo efa nahare ny fanoharana nataon'i Jesosy, Fantatr'izy ireo fa niresaka momba azy ireo.
21:46 Ary na dia nitady hihazona azy, saingy natahotra ny vahoaka, satria nihevitra an'i Jesosy ho mpaminany.